Fitrandrahana solika : nangoron’entana ny Exxon, hanaraka koa ny Madagascar Oil ? | NewsMada
Fitrandrahana solika : nangoron’entana ny Exxon, hanaraka koa ny Madagascar Oil ?
Misedra olana ny fitrandrahana vaventy amin’ny harena an-kibon’ny tany sy ny solika. Mety handao an’i Madagasikara koa ny mpitrandraka menaka mavesatra, Madagascar Oil, amin’ny volana marsa 2016.
Mihapotika hatrany ny tontolon’ny fampiasam-bola, indrindra ny fitrandrahana harena an-kibon’ny tany sy solika. Araka ny loharanom-baovao avy any amin’ny teknisianina iray, niala teto Madagasikara nanomboka ny jolay 2015 ny Exxon Mobil. Mikaroka solika any ambany ranomasina (Off-shore) ity orinasa vahiny ity, any amin’ny faritra telo (Ampasindava, Saint-André ary Mahajanga).
Misy koa ny loharanom-baovao ankehitriny, fa misedra olana ny orinasa Madagascar Oil ankehitriny, efa eo amin’ny dingana fitrandrahana ihany koa. Tsy afaka mandray ny solika mavesatra azo ampandehanana ny milina mandeha amin’ny fuel; ny Jirama (efa banky rompitra sy tsy manam-bola). Efa niteny ny minisitry ny Angovo, herinandro vitsy lasa izay, fa tsy manana ny fotodrafitrasa hitahirizana ireo menaka mavesatra ny Jirama, sady mila fikarakarana manokana koa ny fitaterana azy, hitazonana ny maripana.
Tsy mahita mpiara-miombon’antoka
Etsy ankilany, mitotongana ny vidin-tsolika maneran-tany, ka tsy sahy mampiasa vola amin’ny lafiny fitrandrahana ny mpampiasa vola vahiny. Izany hoe, tsy mahita mpiara-iombon’antoka ara-bola afaka hanampy azy ny Madagascar Oil, amin’ny famokarana vaventy, satria efa vita ny dingana andrana.
Manampy ireo olana sedrain’ny orinasa vaventy vahiny ireo ny tetikasa Ambatovy. Latsaka ambany ny vidin’ny nikela eo amin’ny tsena iraisam-pirenena. Vesaran’ny fandoavana onitra mihoa-pampana amin’ny raharaham-pitsarana tsy mazava, ary indrindra fanerena hetra nofaritan’ny “didy tsotra” (arrêté) navoakan’ny minisitera, mandika ny lalàna mifehy ny fitrandrahana harena an-kibon’ny tany vaventy (LGIM), nolanin’ny Antenimiera.